Moe Sat Archives - ShwengweGames
စကားမပီတဲ့အပွငျ နားပါလေးနပွေီး အနှဈ (၂၀) ကွာထိ ဓား ၊ ကပျကွေးတှရေောငျးနတေဲ့ အသကျ ၇၅ အရှယျ အဘိုးအား ကူညီထောကျပံ့ပေးလိုကျပွနျတဲ့ ကိုမိုးစကျ
January 11, 2022 by Shwengwe Games
ဒါ့ကွောငျ့လညျးပရိသတျတှအေားလုံးက မိုးစကျကို လေးစားခဈြခငျနကွေတာပါ။ဒါတငျမကဘဲ သူရဲ့အလှူလေးတှကေိုလညျး အားလုံးမွငျတှပွေီ့း ပီတိဖွဈရအောငျလညျးရေးသားဖျောပွလရှေိ့ပါတယျ
ဒီကနမှေ့ာတော့ စကားမပီတဲ့အပွငျ နားပါလေးနပွေီး အနှဈ (၂၀) ကွာထိ ဓား၊ကပျကွေးတှရေောငျးနတေဲ့ အသကျ ၇၅ အရှယျ အဘိုးအား ကူညီထောကျပံ့ပေးလှူဒါနျးလိုကျတဲ့မိုးစကျရဲ့သတငျးလေးကို တငျဆကျပေးခငျြပါတယျ။
“ဒီနေ့ ၄၀၀ ဖိုးတော့ ရောငျးရပွီ ဟုတျလား…နတေောငျအတျောမွငျ့နပွေီ အဘရယျ…တဈခါတဈလေ စြေးဦးတောငျမပေါကျဘူး။ဒါပမေယျ့ ဒီနားက လူတှကေ ထမငျးကြှေးပါတယျတျောပါသေးရဲ့ အဘရယျ(အဘက နားအရမျးလေးပွီးစကားလဲ မပီတော့ပါဘူး။
အဆငျပွအေောငျ စာကိုရေးပေးထားတာပါ ဒါနဲ့ အဘရောငျးတာ ဘယျလောကျကွာပွီလဲ အနှဈ (၂၀) ရှိပွီ သွျော တျောတျောတောငျကွာပွီဘဲ သားလဲအားပေးပါမယျ ၊ဘီးလေးနဲ့ ​ကပျကွေးအသေးလေးက ဘယျလောကျလဲ အဘ..ဘီး က ၂၀၀ ၊ ကပျကွေးက ၈၀၀နှဈခုလုံးအားပေးမယျလေ အဘ လြော့ပေးပါဦး၉၀၀ ဘဲ ပေးပါနျော…
ဟုတျကဲ့ အဘ ၊ရော့ ၉၀၀ ဒါ ၉၀၀ ဟုတျလား??? မဟုတျပါဘူး ထောငျကြျောနပွေီ၁၀၀၀ တနျတှလေား(အခုတလော တဈသောငျးတနျသိပျမကိုငျဖူးတဲ့ အဖိုးအဖှားတှေ တှမွေ့ငျနရေတယျဗြာ)မဟုတျပါဘူး အဘရဲ့ ဒါ တဈသောငျးတနျပါ ၊၁၀ရှကျဆိုတော့ တဈသိနျးကပျြပါ အဘ…
ကြေးဇူးတငျပါတယျသားရယျအဘနာမညျက ဦးဟုတျစိနျ ၊အသကျက (၇၅) နှဈနားလေးတဲ့အပွငျ စကားတှလေဲ မပီတော့ပါဘူး။ အဘရောငျးတာလေးတှအေားပေးခငျြရငျ တောငျဒဂုံ ၊(၅၃) စြေး ၊သမထိပျ မှာ ဝယျယူအားပေးနိုငျပါတယျခငျဗြာ။
အဘ က မနကျ (၁၁) နာရီဝနျးကငျြလောကျအထိဘဲ ရောငျးခပြါတယျ။အခုလိုအဖိုးအဖှားတှေ တှမွေ့ငျတဲ့အခါမှာ ၊လှူဒါနျးခှငျ့ရအောငျ ကြှနျတျောနဲ့အတူ ပါဝငျလှူဒါနျးကွသူမြား ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျခငျဗြာ ” လို့ ရေးသားထားပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ လူရှငျတျော မိုးစကျ ကလူတှကေို ပြျောရှငျအောငျ လူရှငျတျောအဖွဈဖြျောဖွပေေးသလို ခကျခဲနတေဲ့ဘဝတှကေိုလညျး စာနာစိတျ တဈခုတညျးနဲ့ ဖေးမပေးတတျတဲ့ ပရဟိတသမားကောငျးတဈယောကျအဖွဈနဲ့ ပွညျသူတှကေို ရယျမောစရာအပွငျ အကူအညီတှပေါ ပေးတတျသူမို့ တကယျကိုလေးစားစရာကောငျးပါတယျ။ ကိုမိုးစကျရဲ့အလှူလေးကို သာဓုချေါဆိုခဲ့ပါအုနျး ပရိသတျကွီးရေ…။
Photo Moe Sat
ဒါ့ကြောင့်လည်းပရိသတ်တွေအားလုံးက မိုးစက်ကို လေးစားချစ်ခင်နေကြတာပါ။ဒါတင်မကဘဲ သူရဲ့အလှူလေးတွေကိုလည်း အားလုံးမြင်တွေ့ပြီး ပီတိဖြစ်ရအောင်လည်းရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်
ဒီကနေ့မှာတော့ စကားမပီတဲ့အပြင် နားပါလေးနေပြီး အနှစ် (၂၀) ကြာထိ ဓား၊ကပ်ကြေးတွေရောင်းနေတဲ့ အသက် ၇၅ အရွယ် အဘိုးအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးလှူဒါန်းလိုက်တဲ့မိုးစက်ရဲ့သတင်းလေးကို တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
“ဒီနေ့ ၄၀၀ ဖိုးတော့ ရောင်းရပြီ ဟုတ်လား…နေတောင်အတော်မြင့်နေပြီ အဘရယ်…တစ်ခါတစ်လေ ဈေးဦးတောင်မပေါက်ဘူး။ဒါပေမယ့် ဒီနားက လူတွေက ထမင်းကျွေးပါတယ်တော်ပါသေးရဲ့ အဘရယ်(အဘက နားအရမ်းလေးပြီးစကားလဲ မပီတော့ပါဘူး။
အဆင်ပြေအောင် စာကိုရေးပေးထားတာပါ ဒါနဲ့ အဘရောင်းတာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ အနှစ် (၂၀) ရှိပြီ သြော် တော်တော်တောင်ကြာပြီဘဲ သားလဲအားပေးပါမယ် ၊ဘီးလေးနဲ့ ​ကပ်ကြေးအသေးလေးက ဘယ်လောက်လဲ အဘ..ဘီး က ၂၀၀ ၊ ကပ်ကြေးက ၈၀၀နှစ်ခုလုံးအားပေးမယ်လေ အဘ လျော့ပေးပါဦး၉၀၀ ဘဲ ပေးပါနော်…
ဟုတ်ကဲ့ အဘ ၊ရော့ ၉၀၀ ဒါ ၉၀၀ ဟုတ်လား??? မဟုတ်ပါဘူး ထောင်ကျော်နေပြီ၁၀၀၀ တန်တွေလား(အခုတလော တစ်သောင်းတန်သိပ်မကိုင်ဖူးတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေ တွေ့မြင်နေရတယ်ဗျာ)မဟုတ်ပါဘူး အဘရဲ့ ဒါ တစ်သောင်းတန်ပါ ၊၁၀ရွက်ဆိုတော့ တစ်သိန်းကျပ်ပါ အဘ…
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သားရယ်အဘနာမည်က ဦးဟုတ်စိန် ၊အသက်က (၇၅) နှစ်နားလေးတဲ့အပြင် စကားတွေလဲ မပီတော့ပါဘူး။ အဘရောင်းတာလေးတွေအားပေးချင်ရင် တောင်ဒဂုံ ၊(၅၃) ဈေး ၊သမထိပ် မှာ ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
အဘ က မနက် (၁၁) နာရီဝန်းကျင်လောက်အထိဘဲ ရောင်းချပါတယ်။အခုလိုအဖိုးအဖွားတွေ တွေ့မြင်တဲ့အခါမှာ ၊လှူဒါန်းခွင့်ရအောင် ကျွန်တော်နဲ့အတူ ပါဝင်လှူဒါန်းကြသူများ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ” လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ လူရွှင်တော် မိုးစက် ကလူတွေကို ပျော်ရွှင်အောင် လူရွှင်တော်အဖြစ်ဖျော်ဖြေပေးသလို ခက်ခဲနေတဲ့ဘဝတွေကိုလည်း စာနာစိတ် တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖေးမပေးတတ်တဲ့ ပရဟိတသမားကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ ပြည်သူတွေကို ရယ်မောစရာအပြင် အကူအညီတွေပါ ပေးတတ်သူမို့ တကယ်ကိုလေးစားစရာကောင်းပါတယ်။ ကိုမိုးစက်ရဲ့အလှူလေးကို သာဓုခေါ်ဆိုခဲ့ပါအုန်း ပရိသတ်ကြီးရေ…။
Categories Celebrities Tags Celebrity, Moe Sat Leaveacomment